Ndiani Achavaka Yako Inotevera Webhusaiti? | Martech Zone
Chishanu, December 28, 2018 Chishanu, December 28, 2018 Douglas Karr
Ini ndakaita hurukuro yakanaka neyekuchinja muhondo nhasi anga achishuva kukwira mukusimudzira. Akaodzwa mwoyo nekuti ainyorera junior kumberi-kumagumo mushambadzi mabasa mudunhu rese asi akafamba achinzwa asingakwanise uye akundwa. Ndakamukurudzira kuti nyaya yacho yaisave yake akakodzera, nyaya yaive nyonganiso mukati meindasitiri yedu.
Kwemakumi maviri emakore apfuura, ndakagara pamativi ese emadziro ekushambadzira epamhepo - kusanganisira kubvunza pamusoro nekuvandudza kusangana, kugadzira uye kuyedza nzvimbo dzemushandisi dzechiitiko chemushandisi, manejimendi manejimendi kugadzira uye kuisa pamberi pechigadzirwa zvigadzirwa, mushandisi-kumashure-kumagumo, kumberi -end yekuvandudza, uye kunyange dhizaini. Zvakawanda zvekushungurudzika uye kuvhiringidzika kwandinoona muindastiri yedu ndeyekuti mazwi haana kujeka uye tsananguro dzinowanzoitika.
Akafunga kuti junior kumberi-kumagumo basa rekuvandudza rinogona kuve rakakura rekupinda-poindi mune basa rekuvaka mawebhusaiti. Akabatanidza mberi-kumagumo kuvandudza ne aesthetics uye kudyidzana kwemushandisi. Ini ndaifanirwa kutsanangura nepo ichokwadi, hapana munhu anoshandira kumberi-kumagumo kunogadzira kuti vagadzirise webhusaiti yavo. Icho chinzvimbo chakatariswa zvakanyanya icho chinowanzo gadzira webhu application mushandisi zviitiko zvemakambani makuru.
Ndeupi Musoro weJobho Unovaka Mawebhusaiti?
Saka iwe unotenda iwe unoda webhusaiti nyowani. Unobhadhara a web kuvandudza? Unobhadhara a web designer? Unobhadhara a mutengesi wekutengesa? Zvakadii ne SEO chipangamazano?
Kana makambani anoita zvibvumirano nechimwe cheizvo zvataurwa pamusoro, zvinhu zvinowanzoita shanduko yezvakaipa. Iko kushushikana kunoitika kana tarisiro dzikasasangana. Ini ndichapa mimwe chaiyo-yenyika mienzaniso:
Isu takahaya a web designer. Nzvimbo iyi yakanaka, asi isu hatisi kuwana chero inotungamira.
Isu takahaya a mugadziri / programmer. Isu takashandisa mari yakati wandei asi saiti iri ngoro uye haisati yaitwa.
Isu takahaya a wekushambadzira agency. Iyo saiti nyowani yakanaka asi iri kunonoka chaizvo uye isu tarasikirwa neetoni yetraffic.
Isu takahaya a graphic gadzira. Kushambadzira kwedu kunotyisa asi yedu saiti inotyisa uye hatigone kufunga maitiro ekugadzirisa chero chinhu.
Isu takahaya an SEO chipangamazano. Isu tinoronga zvirinani ikozvino nekuwanda kwemaindasitiri mazwi, asi hazvina kutungamira kune chero bhizinesi rekuwedzera.
Nguva dzese kambani painobuda kunovaka hunyowani hwewebhu, tarisiro yacho inofanira kugara yakafanana ... kukura bhizinesi ravo uye kuwana yakanaka kudzoka pane yavo yekudyara.
Dzimwe nguva, izvo zvinongova nenzvimbo ine chekuita inobatsira iyo inobatsira kuvaka ruzivo rwechiratidzo chako. Dzimwe nguva tarisiro ndeyekuvaka yako pachako kana yekambani masimba mune yako indasitiri. Nguva zhinji, kutarisira kuri kuwana zvakawanda zvinotungamira kune rako rekutengesa timu. Kana iwe uri ecommerce saiti, iri yakawanda traffic kutyaira kwakawanda kutendeuka.
Wacherekedza here izvo zvisina kutaurwa neizvo zvinotarisirwa?
Iyo saiti yakanakisa uye inoratidza chiratidzo changu zvakakwana.
Iyo saiti inopindura uye yakagadzirirwa zvakanaka kune vandino tarisa vateereri (s) kufamba uye kuwana ruzivo rwavanoda.
Iyo saiti inokurumidza uye inoshandisa akanakisa maitiro einjini dzekutsvaga kuinongedza nenzira kwayo.
Iyo saiti inodzidzisa, ichipa zvirimo zvakafanira kubatsira tarisiro yangu kuita sarudzo yekutenga.
Iyo saiti iri nyore kushandisa, pamwe nekuchinjika kuita chero shanduko dzatingangoda mune ramangwana.
Iyo saiti inosanganisirwa kune edu mamwe masisitimu, ichideredza kuyedza kunodiwa kufambisa data pakati pekutengesa, kushambadzira, rutsigiro, uye mamwe masisitimu.
Iyo saiti yakagadzirisirwa pasocial media, ichipa simba kumarevereri angu kuti vagovane nyore nyore ruzivo mune zvakanaka-zvakagadziridzwa zvigadziriso.
Iyo saiti irikuita mushe sechikamu chedu chedu chese Kuzivisa kwedu uye madhibhodhi atinowana ari kutibatsira isu tichienderera nekukwirisa nekuvandudza zvatinopa.
Zvese izvi zvibodzwa hazviwanzo kukurukurwa mumisangano neako [isa zita apa], asi zvinofanirwa kunge zviri izvo. Dambudziko nderekuti nzvimbo yemusika wetarenda inowanzo kutsemuka. Vatengi vandinoshanda navo vakagara vachishandisa mazana ezviuru zvemadhora pakati pevashandi vekunze nevekunze zviwanikwa ... uye havana kumbosangana neiyo zvinangwa pamusoro.
Kana iwe uchihaya mugadziri kana programmer, tarisiro yemugadziri iyeye kazhinji kuti ivo vachatanga neye isina chinhu mupepeti uye vanyore mutsara wega wekodhi iwe wawakumbira. Ndiko kupenga mazuva ano. Ini ndakakanda chaizvo kodhi iyo yakatora makore kuti ikure uye mazana ezviuru zvemadhora kune mhinduro dzinodhura mazana emadhora. Ini handisi kupomera programmer yeizvi, ivo vari kuita zvinoitwa nevagadziri. Dambudziko igap mukutarisira.
Kana iwe uchihaya mugadziri, yako saiti inogona kunge inoshamisa. Asi ivo zvakare vanogona kuomesa-kodhi zvinhu zvinoita kuti zvikone kuita edits. Ivo vanogona kushandisa isina kumanikidzwa mifananidzo, zvichikonzera iyo saiti kurodha zvishoma. Uye ivo vanogona kunge vasingazvibatanidze iyo kune mhinduro yekutungamira kubatwa. Ini ndakambova nemutengi wandibata neni mwedzi mushure meiyo nyowani, yakanaka saiti yaive yekurarama. Ivo vakatadza kunzwisisa kuti nei yanga isinga gadzire chero tungamire uye vakanditsvaga kuti ndibatsire. Mukati memaminetsi, ini ndakaona kuti chimiro chavaive nacho chaingova chetsvarakadenga uye havana kunyatso kuendesa iyo data chero kupi. Vangave vakave nemazana emitobvu… asi havana kana nzira yekuziva nayo. Dhizaini yekugadzira yakasangana nezvavanotarisira… asi kwete bhizinesi rinodiwa.
Kazhinji kazhinji kwete, ini ndinoona masaiti anotengeswa se zvirongwa. Nekuda kweizvozvo, iyo agency, dhizaini, kana musimudziri anopihwa mubairo wezvemari wekuendesa saiti iyo inotora nzira dzese diki dzinogoneka kuchengetedza nguva uye kuita purofiti iri nani pane iko kuita. Uye, hongu, chirongwa ichi chinoenda kune wakaderera kwazvo (kana padhuze nemutengesi wakaderera). Makambani dzimwe nguva vanoseka kuti vane mumwe munhu anotora saiti zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora uye ivo vakakwanisa kuita yavo kuvakirwa zviuru zvishoma zvemadhora. Ini ndinoteedzera kubvunza kuti zvinoitwa sei kubhizinesi ravo uye mhinduro inowanzo… o, tinowana mazhinji ebhizinesi redu na izwi remuromo.
Zvakanaka duh. Yako saiti yakachipa inoyamwa. Wakarasa mari kure. Dai iwe waisa mari iyo $ 25,000, iwe ungangodaro wakapeta kaviri kukura kwebhizinesi rako zvichienderana nekwaniso yesource yawanga uchizohodha.
Kuhaya sosi yekushambadzira uyo anonzwisisa zvaunoda zvebhizinesi uye anogona kutsvagisisa vateereri uye zvinangwa zvauri kuyedza kuwana irinani iri nani. Mumwe munhu kana sangano rinonzwisisa zvemukati, tsvagiridzo, dhizaini, budiriro, kusangana, analytics, mamiriro ezvekushandisa uye mapuratifomu, kusangana, pamwe nemaitiro munharaunda, kutsvaga, nhare, kushambadzira, vhidhiyo, nezvimwewo… zvinogona kufambisa tsono kumberi. kune ako epamhepo ekushambadzira zvido.
Asi izvo hazviwanzo kuve dhizaini kana mushambadzi.
Zano rangu kune uyu murwi? Akaburitswa zvine rukudzo saka tinoziva ane hunhu hwakanaka uye hunhu hwekushanda. Akafamba zvakanyanya pasirese panguva uye mushure mekunyorwa kwake, saka ane bhizimusi rakakura acumen uye neruzivo hapana mumwe munhu anaro. Aive mukurumbira uye aikurukura nevanhu, ndakanakidzwa nenguva yangu ndichitaura naye.
Akabvuma kuti aisambofunga kuti anogona kugara pamberi pechiso zuva rese achinyora kodhi saka ndakamuraira kuti asiye chinangwa chake chekuve developer. Izvi hazvireve kuti ndakamurayira kuti asiye budiriro, Ndinofunga anofanirwa kuteedzera hunyanzvi hwekuvaka ipapo. Ndinoita tani yekusimudzira, asi haisati iri iyo kutarisira yevatengi vangu. Ivo vanoda mhedzisiro yebhizinesi, kwete kodhi.
Nekuvandudza ruzivo rwakakura uye hunyanzvi muindasitiri yangu, ini ndinokwanisa kuisa pamberi pekudyara kwavo uko kwaizowana iyo yepamusoro ROI. Haufanire kunge uri kana kuwana akanakisa dhizaina, mushambadzi akanakisa, akanakisa SEO mubatsiri, akanakisa chero… unogona kuwana izvo zviwanikwa kana uchizvida. Chinangwa chako chekutanga kana uchihaya mumwe munhu kuti avake yako inotevera webhusaiti kutsvaga mumwe munhu anonzwisisa bhizinesi rako.
Ini handivake mawebhusaiti evatengi vangu, ini ndinogadzira mhedzisiro yebhizinesi ndichishandisa zvinhu zvakawanda… kusanganisira webhusaiti.
Tags: kumberi-kumagumo mushambadziuiwebhusaiti webhusaitiwebhusaiti chirongwa
Maitiro Ekudzima Ese WordPress Mhinduro